Solskjaer: Ciyaartoyda Man Utd Waa Inay Ku Qanciyaan Pogba Inuu Saxiixo Qandaraas Cusub
HomeWararka CiyaarahaSolskjaer: Ciyaartoyda Man Utd waa inay ku qanciyaan Pogba inuu saxiixo qandaraas cusub
September 14, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Ole Gunnar Solskjaer ayaa sheegay inay ku xiran tahay Manchester United inay ku qanciso Paul Pogba inuu saxiixo qandaraas cusub.
28 jirkaan mustaqbalkiisa ayaa si weyn isha loogu hayaa isagoo galaya sanadka ugu dambeeya qandaraaskiisa.
Pogba ayaa xilli ciyaareedkan ku bilowday qaab feecan, isagoo urursaday 7 caawin afar kulan oo uu ciyaaray.
Solskjaer ayaana mar kale ku celiyay inuu aaminsan yahay in kooxda United ay door weyn ka ciyaari doonto sidii Pogba loogu sii hayn lahaa Old Trafford.
“Waa hagaag, annaga ayay nagu xiran tahay inaan helno natiijooyin si aan nafteena u caddeynno inaan ku guuleysan karno koobab,” ayuu Solskjaer u sheegay suxufiyiinta ka hor kulanka Talaadada ee Young Boys ee Champions League.
“Waxaan u maleynayaa in qof walba oo u saxiixo Manchester United uu doonayo inuu koobab ku guuleysto.
“Taasi waa dareenka ugu badan, si aan qeyb uga noqdo kooxda guuleysata ee Manchester United .
“Qof walba wuxuu diiradda saarayaa inuu sameeyo intii karaankiisa ah, haddaba aan aragno meesha aan aadno.”
Waxay ila tahay in Xidigaha Kooxda ay ku qancin karaan Pogba heshiiskiisa Cusub ee Kooxda.